linoo-ayar: ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင် (၅)ကို ြပန်လည်တင်ြပြခင်းနှင့် ယခုြကံုေတွ့ေနရေသာ အေြခအေနများ
ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင် (၅)ကို ြပန်လည်တင်ြပြခင်းနှင့် ယခုြကံုေတွ့ေနရေသာ အေြခအေနများ
By သစၥာ | သ​စ္စာ on 6:55 PM ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင်များ
ဒီပိုစ့်ေလးကို တင်ထားတာေတာ့ ြကာပါြပီ။ မဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာမှာလည်း ေဖာ်ြပခဲ့ြပီးြပီ။ အဲ့တုန်းကလည်း မေရးဖို့ မတင်ဖို့ ကန့်ကွက်မှုေတွ ရိှခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း ထပ်ြပီးေတာ့ ကန့်ကွက်မှုေတွ ေပါ်လာြပန်ပါေရာ။ ကျွန်ေတာ့်အေနနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ထိခိုက်လိုစိတ်မရိှပါဘူး။ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ြမင်ေစချင်တာပဲ ရိှပါတယ်။ ေနာက်ြပီးေတာ့ အခုတစ်ေလာေပါ့ေလ။ ကျွန်ေတာ်သိရတာ တစ်ပါတ်ေလာက်ပဲ ရိှဦးမယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေကာင့် နဲ့ လူတစ်ေယာက် ၀င်ေမွှေနတယ်။ ကျွန်ေတာ် Password ေြပာင်းခဲ့တယ်။ ဒါေပမယ့်လည်း သူက ၀င်ေနတာပဲ။ အခုတစ်ေလာ အဲ့လိုမျုိး စိတ်အေနှာက်အယှက်ေလးေတွ ေတာ်ေတာ်ေလးများလာတယ်။ ပုတ်ခတ် ေ၀ဖန်မှုေတွ များလာတယ်။ ြပီးေတာ့ ကျွန်ေတာ့် ပိုစ့်ေတွကို လူတစ်ေယာက်က သူ့ဆီမှာ အကုန် ယူသံုးထားတယ်ဆိုတာကို သတင်းေပးလို့ သွားြကည့်ေတာ့ ေတာ်ေတာ်ေလးလန့်သွားမိတယ်။ ဟုတ်တယ်ဗျ။ ကျွန်ေတာ့်ေရးထားတာေတွ အကုန် သူ ယူသံုးထားတယ်။ တစ်ချို့ blog ကေန ရပ်နားသွားတဲ့အေြကာင်းရင်းတစ်ချို့မှာ ဒီလိုကိစ္စေတွ ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ဆက်ေရးေနမှာပါ။ ကျွန်ေတာ်သတိေပးချင်တာက ဒီမှာတင်ထားတဲ့ ပုိစ့်ေတာ်ေတာ်များများဟာ မဂ္ဂဇင်းေတွမှာ ပါြပီးသားဆိုတာကိုပါ။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ဒီပိုစ့်ေလးကို မဖတ်ရေသးတဲ့သူေတွကို ဖတ်ေစချင်တယ်။ ဒါေြကာင့် “ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင်(၅)ကို ြပန်တင်ေပးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
၂၀၀၂ခုနှစ်က ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံ ဂီတေလာကမှာေအာင်ြမင်မှုမှတ်တိုင်ေတွစိုက်ထူခဲ့တဲ့ နာမည်ြကီး Rock ေတးသံရှင် ေလးြဖူရဲ့ “လိပ်ြပာ“ေတးစီးရီးကို ပရိသတ်ေတွ နားေထာင်ြပီးြဖစ်မှာပါ။ ေတးစီးရီးမထွက်ခင်ကတည်းက ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သီချင်းအသစ်ေတွ ဖန်တီးထားတယ်ဆိုတဲ့ အေြကာင်း၊ အပင်ပန်းခံြပီး ေသေသချာချာြကိုးစားတီးခတ်ပံုေဖာ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အေြကာင်း Media စာမျက်နှာ အများအြပားမှာ ေဖာ်ြပခဲ့ြကပါတယ်။ နာမည်ြကီးကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ေတးေရးအတွဲြဖစ်တဲ့ ေမာင်ေမာင်ေဇာ်လတ်နဲ့ အယ်ြဖူတို့ရဲ့ လက်ရာေတွ ြဖစ်တဲ့အတွက်လည်း အေခွမထွက်ခင်ကပင် ပရိသတ်စိတ်၀င်စားမှုကို အများအြပားရရိှခဲ့ပါတယ်။
ေမာင်ေမာင်ေဇာ်လတ်တို့ရဲ့ The Ants အဖွဲ့ဟာ Metal Zone Studioမှာ ဒီလိပ်ြပာအေခွအတွက် ေရွးချယ်ထားခဲ့တဲ့သီချင်းေတွကို တီးခတ်ြပီး I.C အဖွဲ့မှ Arrangement ေတွကို မွမ်းမံြပင်ဆင် သင့်တာေတွြပင်ဆင်ြပီး အေချာသတ်စီစဉ် ထုတ်လုပ်ခဲ့ြကတာပါ။ သီချင်းေတွကို ပံုစံေတွပိုေပါ်လွင် လာေအာင် Demo သေဘာမျိုး အရင်သွင်းေပးခဲ့ြကတယ်ဆိုပါေတာ့။
လိပ်ြပာအေခွကို နားေထာင်ရတဲ့အခါမှာေတာ့ စိတ်ထဲမှာ သိပ်ဘ၀င်မကျတာေတွ ေတွ့ရိှရပါ ေတာ့တယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ဟာ ဒီလိပ်ြပာ အေခွကို ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်အေခွတစ်ေခွအေနနဲ့ ဖန်တီးသူ အားလံုးရဲ့ အနုပညာကို ေလးစားစွာနဲ့ ခံစားနားဆင်ခဲ့တာပါ။ ပထမအပုဒ် “အမဲလိုက်အက”နဲ့ စီးေမျာရင်း ဒုတိယအပုဒ် “ထားခ့ဲဦး”မှာေတာ့ ကျွန်ေတာ်မျက်လံုးနည်းနည်းကျယ်လာပါတယ်။ ဘာြဖစ်လို့လဲ ဆိုေတာ့ Creed အဖွဲ့ရဲ့ My Sacrifice ဆိုတဲ့သီချင်းနဲ့ ဆင်တူေနလို့ပါ။ ေရှ့ပိုင်း Guitar Picking ေတွဟာ ဆင်တူယိုးမှားရိှြပီး Solo တီးပံုေတွကေတာ့ မှီြငမ်းထားတာ သိသာ လှပါတယ်။ Solo အြပီး Chorus အ၀င်မှာ Drum ကို Triplet ပံုစံ ေဖာက်တီးထားတာကေတာ့ ကွက်တိပါပဲ။ Chorus ကို Picking Only နဲ့ဆိုြပီးမှာ Full Band နဲ့ ထပ်ဆိုထားတာလည်း အတူတူပါပဲ။ သံစဉ်နဲ့ Chord အသွားအလာ ေတွ ဆင်တူယိုးမှားရိှတဲ့ သီချင်းနှစ်ပုဒ်မှာ Arrange ချင်းကအစ တူေနတာကေတာ့ သိပ်မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
Side A ေနာက်ဆံုးအပုဒ်က “ေလလွင့်သူ”။ အယ်ြဖူရဲ့အေတွးအေခါ်ေကာင်းေကာင်း၊ သံစဉ်အား ေကာင်းေကာင်းနဲ့ ေရးစပ်ထားတဲ့ Slow သီချင်းေလးတစ်ပုဒ်ပါ။ ဒါေပမယ့် ခက်တာက The Smashing Pumpkins အဖွဲ့ရဲ့ Take me down ဆိုတဲ့သီချင်းေလးနဲ့ တူေနတာပါပဲ။ 1997 Grammy awards ရရိှခဲ့တဲ့ The Smashing Pumpkins ရဲ့ Bullet with butterfly wings သီချင်းပါတဲ့ Mellon Collie and the infinite sadness ဆိုတဲ့ နှစ်ေခွတွဲအေခွထဲက သီချင်းေလး တစ်ပုဒ်ပါ။ သိပ်ေတာ့သိသိသာသာြကီး မတူလှပါဘူး။ အိပ်မက်တစ်ခုမက်သလို ၀ိုးတိုး၀ါးတားေလးပါ။
ကျွန်ေတာ် ဒီေလာက်ထိ နားလည်ေပးလို့ရပါတယ်။ ဒါေတွဟာ ြဖစ်ရိုးြဖစ်စဉ်ေတာ့မဟုတ်ေပမယ့် copy ေတွချည်းသက်သက်လုပ်လာတဲ့ ကျွန်ေတာ်တို့ဂီတေလာကမှာ “တု” နဲ့“ြပု” အဆင့်ေလးကို နားလည်ေပးလို့ရပါတယ်။ ဒါေပမယ့် လံုး၀နားမလည်နိုင်ေလာက်ေအာင် ြဖစ်သွားခဲ့တာေတာ့ လွန်ခဲ့တဲ့(၆)လေလာက်ကမှပါပဲ။ ကျွန်ေတာ့်သူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်အိမ်လာြပီး KROQ (Vol.15) ထဲက သီးချင်းေလး တစ်ပုဒ် နားေထာင်ြကည့်ပါဆိုြပီး ဖွင့်ြပတယ်။ “Dapche Mood” အဖွဲ့ရဲ့ “Dream On” ဆိုတဲ့ သီချင်းပါ။ Dapche Mood” အဖွဲ့ အရင်က MTV မှာ တစ်ခါ နှစ်ခါေလာက် ြကည့်ဖူးေပမယ့် သိပ်သတိမထားမိပါဘူး။ ဒီသီချင်းေလး Intro စ၀င်လာကတည်းက ကျွန်ေတာ့် စိတ်ထဲ ေြပး၀င်လာတဲ့တစ်ပုဒ်က “အေဖ”။ လိပ်ြပာအေခွထဲက “အေရးမြကီးဘူး” နဲ့ “ထားခဲ့ဦး” တို့ြပီးရင် လူြကိုက်အများဆံုး ရှားရှားပါးပါး အေဖ့ရဲ့ေမတ္တာကို ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်။ အဆိုရှင်က ေတးေရးကို အေဖအေြကာင်း သီချင်းတစ်ပုဒ်ေလာက် ေရးြကည့်ပါလားလို့ တိုက်တွန်းတဲ့ အခါ ေတးေရးသူက စိတ်ကူးေပါ်လာြပီး ေရးရာက သံစဉ်ေရာ၊ စာသားပါ ကွက်တိထွက်လာတယ် ဆိုတဲ့ သီချင်းေလး။ (ဒါေြကာင့် ြမန်တာ အခုမှ သေဘာေပါက်ပါေတာ့တယ်) ။ Intro စလို့ Chorus မ၀င်ခင်အထိ ေနာက်ကတီးေနတဲ့ Guitar Pickingက တစ်ထပ်တည်း။ ပိုြပီးဆိုးတာက Pre Chorus အပိုဒ်ြဖစ်တဲ့ “ဟူး..ဟူး..အေဖ...မရိှေတာ့တဲ့ေနာက်..လမ်းေပျာက်တဲ့ ေနာက်”ဆိုတဲ့ အပိုဒ်ဟာ Copy ယူထားသလား ေအာက်ေမ့ရေလာက်ေအာင်ကို 1st Line Melodyက တူညီေနပါတယ်။ ဒီသီချင်းကို နားေထာင်လိုက်ရံုနဲ့ဒါဟာ “အေဖ”သီချင်းရဲ့မူရင်း( အဲမှားလို့) ေတာ်ေတာ်ေလး မှီြငမ်းထားတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်ပါတယ်။ ဒီသီချင်း နားေထာင်ြပီး ကျွန်ေတာ့်စိတ်ထဲမှာ အေတာ့်ကိုပဲ မွန်းြကပ်သွားတယ်။
ဒီအေြကာင်းေတွကို ေရးသင့်၊ မေရးသင့်စဉ်းစားေနရင်းနဲ့ အချိန်ေတွမနည်းြကာသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် အမှန်တရားကို လူေတွသိေစ ချင်တာရယ် ဘယ်သူ့ကိုမှနာမည် ပျက်ပါေစဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးမရိှတဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်လံုတာရယ်ေြကာင့် ေရးြဖစ်သွားတာပါ။ ဒီလို ကိုယ်ပိုင် သံစဉ်ဆိုြပီး ြပည်ပသီချင်းေတွကို သိသိသာသာေရာ၊ မသိမသာပါ မှီးထားတာေတွကို ကျွန်ေတာ်တို့ မြကာခဏ ြကားေန၊ သိေနရပါတယ်။ အယ်ေနှာင်းရဲ့ ဒုတိယအေခွ“ခိုင်ြမဲြခင်း”ထဲက “အေဖာ်မဲ့ြခင်း”ဆိုတဲ့ သီချင်းဟာ“Nirvana” ရဲ့ “When did you sleep last night? ဆုိတဲ့ သီချင်းကို သိသိသာသာ ပံုတူကူးထားတာပါ။ အယ်ေနှာင်းက သူ့အေခွကို ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းများလို့ ေြကြငာထားပါတယ်။ မျိုးေကျာ့ြမိုင်ရဲ့ “တစ်မိနစ်ထပ်ေနာက်ကျ”သီချင်းက “Sublime”အဖွဲ့ရဲ့ Raggae သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ပံုေြပာင်းထားတာပါ။ Big Bag အဖွဲ့ရဲ့ “ပန့်အေြကာင်းမေြပာနဲ့”အေခွထဲက“ကာတွန်း”သီချင်းဟာ ြမန်မာြပည်မှာ လူသိပ်မသိေသးတဲ့ “Ash”ဆိုတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ “Burn Baby Burn”ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ ဆင်တူသလို၊ “ဟင်းလင်းြပင်ထဲမှာ”ဆိုတဲ့ သီချင်းရဲ့ Chorus ဟာ “Travis”အဖွဲ့ရဲ့ “Flower in the window” သီချင်းရဲ့ Chorus ကို တိုက်ရိုက်ကူးထည့်ထားတာပါ။ Big Bag အဖွဲ့ကေတာ့ သူတို့သီချင်းေတွကို Owntune,Copy မှီြငမ်း စသည်ြဖင့် ေခါင်းစဉ်တပ်မထားပါဘူး။
နိုင်ငံြခားမှ ဘယ်သီချင်းရဲ့ Guitar Riff, Frame ေတွကို မှီြငမ်းထားတယ်လို့ ၀န်ခံခဲ့တဲ့ အဲလက်စ်ေတာင် သူ၀န်မခံခဲ့တဲ့ သီချင်းေတွ ရိှေနပါေသးတယ်။ “စိတ်ကူးသက်သက်များ”အေခွထဲက “လိုချင်တာယူ”ဆိုတဲ့သီချင်းရဲ့ Intro ဟာ Bushအဖွဲ့ရဲ့ Everything Zen ဆိုတဲ့ သီချင်းရဲ့ Intro နဲ့ တထပ်တည်းပါပဲ။ ၁၉၉၆က အေခွထဲက “စဉ်းစားပါ”ဆိုတဲ့ သီချင်းဟာ Alter Bridge အဖွဲ့ရဲ့ Open Your Eyes ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ပံုတူကူးခဲ့တာပါ။
ကျွန်ေတာ်ဟာ သိလွန်း တတ်လွန်းလို့ ေလှျာက်ေြပာေနတာေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ြကံုရ၊ ြကားရ တာေတွဟာ များလာေတာ့ မေနနိုင် မထိုင်နိုင်ကို ြဖစ်လို့ေရးမိသွားတာပါ။ အခုဆို ကျွန်ေတာ်တို့ ဂီတေလာကမှာ သူများသီချင်းခိုးရံုတင် မဟုတ်ေတာ့ဘဲ လိမ်တဲ့ အဆင့်ပါ တိုးလာြပီဆိုေတာ့ ေဆးပညာအသံုးအနှုန်းအရေြပာရရင် Prognosis မေကာင်းေတာ့ဘူးေပါ့။ နာမည်ြကီး Grunge ဂီတအဖွဲ့ Nirvana ရဲ့ အဆိုရှင် ဂစ်တာသမား Kurt Cobin ဟာ သူ့ကိုယ်သူ သတ်မေသခင် ေရးခဲ့တဲ့စာမှာ “ကျွန်ေတာ် ခင်ဗျားတုိ့ကို အရူးမလုပ်ချင်ေတာ့ဘူး။ ပရိသတ်ကို လိမ်ညာတယ်ဆိုတာ အြကီးမားဆံုး ရာဇ၀တ်မှုတစ်ခုပဲ” ဆိုတဲ့ စာပိုဒ်ေလးနဲ့ အဆံုးသတ်ထားပါတယ်။ အနုပညာအေပါ် ထားရိှတဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်ဓါတ်၊ ခံယူချက်ဟာ ေလးစားစရာပါ။
အခုလို ြဖတ်၊ ညှပ်၊ ကပ် သီချင်းေတွ ထွက်ေပါ်လာတာ ဘယ်သူ့မှာ တာ၀န်အရိှဆံုးလဲ။ အဆိုေတာ် လား၊ ေတးေရးလား၊ Player ေတွ လား၊ “လား”ေပါင်းများစွာနဲ့ဘဲ ဒီေမးခွန်းေတွဆက်ရိှ ေနဦးမှာ လား။ လူငယ်ေတွဟာ ဂီတအနုပညာရှင်ေတွကို ချစ်ြကတယ်၊ ြမတ်နိုးြက တယ်။ အထူးသြဖင့် တစ်ေန့မှာ ဂီတေလာကထဲ၀င်ေရာက်ြပီး ဂီတသမားလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အေတွးအိပ်မက်ေတွရိှတဲ့ လူငယ်ေလးေတွဟာ ပိုြပီးေတာ့ ေလးစားအားကျြကတယ်။ အတုယူြကတယ်။ ဒါေြကာင့်နာမည်ေကျာ် ဂီတအနုပညာရှင်ေတွကလည်း ကိုယ့်အနုပညာကို တန်ဖိုးထားြပီး လမ်းမှန် ကမ်းမှန်နဲ့ ဖန်တီးြပဖို့ လိုပါတယ်။ Copy ဆိုလည်း Copy လို့ ေြကြငာခွင့်ရိှေနပါလျက်နဲ့ ဖံုးကွယ်ေနတာ ကေတာ့ မေကာင်းပါဘူး။ Own Tune အစစ်အမှန်ေတွကိုလည်း ကျွန်ေတာ်တို့အားေပးတာပဲ။ ပရိသတ်က Own Tune ေတွ သိပ်လက်မခံလို့ Copy ေတွလုပ်ရတယ်ေြပာလည်းလုပ်ပါ။ ရပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ြဖတ်၊ ညှပ်။ ကပ်ေတွကိုေတာ့ Own Tune လို့ နာမည်မတပ်ချင်ပါနဲ့။ ေနာင်လာမည့် လူငယ်ဂီတ သမားေတွဟာ ဒါေတွကို အတုယူြပီး ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းေတွ ဖန်တီးတဲ့ေနရာမှာ ခံစားမှုအတွက် နှလံုးသား၊ အတတ်ပညာပိုင်းအတွက် ဦးေနှာက်တုိ့ထက် “ကပ်ေြကးနဲ့ ေကာ်” ကိုသာ ပိုြပီး အသံုးြပုြကလိမ့်မယ်ဆိုရင် ...............။ ...................။
12 Response to 'ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင် (၅)ကို ြပန်လည်တင်ြပြခင်းနှင့် ယခုြကံုေတွ့ေနရေသာ အေြခအေနများ'
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_27.html?showComment=1206675981436#c6811092759560902264'> March 27, 2008 at 8:46 PM
စိုးထက် - Soe Htet !
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_27.html?showComment=1206676871032#c8331177930504015635'> March 27, 2008 at 9:01 PM
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_27.html?showComment=1206683084840#c2854776965011218673'> March 27, 2008 at 10:44 PM
ခင်ဗျားဒီလို ေြပာြပေပးတာဟာ ခင်ဗျားသမိုင်းတာ၀န်ေကျတာပဲ။ ေလးစားပါတယ်ဗျာ။ ေရှ့ကလူေတွ ဒီလို မေြပာခဲ့ရင် ေနာက်မျိုးဆက်ေတွ အဖို့ တလွဲဆံပင်ေကာင်း ြဖစ်တတ်ပါတယ်ဗျာ။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က ထိုင်းအေရှ့ေြမာက်ပိုင်း ေအာ်ခက်စြတာလို့ ဆိုရမယ့်၊ ထိုင်းမှာလည်း ေတာ်ေတာ် ေပါက်ခဲ့တဲ့ စင်တင်ေဖျာ်ေြဖပွဲ အေခွ အမှတ်မထင်ြကည့်လိုက်ရတယ်။ သူတို့ အေခါ် အိစန် ယဉ်ေကျးမှုေပါ့ဗျာ။ ၀င်ေြကးနင့်ေနေအာင်ေပးြပီး ြကည့်ရရတာမျိုးဗျ။ ကျေနာ်ေြပာချင်တာကေတာ့ သူတို့ တီးလံုးထဲက တစ်ခု အေြကာင်းပါ။
ြကားြကားချင်း ြပန်ရစ်ြကည့်ေသးတယ်ဗျ။ ကျေနာ်တို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ြကားေနြက၊ ပါးစပ်နဲ့ေတာင် တီးတတ်ေနြကတဲ့ “ြမန်မာစံေတာ်ချိန်”တီးလံုးဗျ။ ကျေနာ်မျက်လံုးြပူးသွားတာေပါ့ဗျာ။ ဒါနဲ့ ေမးြကည့်ေတာ့ ယိုးဒယားေရှးေခတ်က တီးလံုးတေြကာ့ပါတဲ့။ ေဩာ် ငါ့နှယ်ြဖစ်ရေလလို့သာ ေအာက်ေမ့မိတယ်။ ြမန်မာ သီချင်းေတွထဲမှာ ယိုးဒယားသီးချင်းခန့် ဆိုတာမျိုး သိထားေပမယ့်၊ နိုင်ငံေတာ်စံချိန်တီးလံုးြကီးဟာ ယိုးဒယားဆီက ေကာ်ပီြဖစ်မှန်း မသိခဲ့တာ ဘယ်သူေတွက အ သလဲ မေြပာတတ်ေတာ့ပါဘူး။ ြမန်မာမှာေရာ သိြကရဲ့လားသာ ေမးချင်တာပဲ။
ဒါကိုေြပာချင်တာပါ။ ေရှ့လူေတွ လှျိုထားခဲ့ေတာ့ ကျေတာ်တို့က တလွဲဆံပင်ေကာင်း ထင်ေနတတ်ြကတယ်ဆိုတာ။
ခုလို ကိုယ်နားလည်တဲ့ နယ်ပယ်အတွက် ေရးသားေပးတာဟာ သုေတသန တစ်မျိုးလို့ပဲ ေအာက်ေမ့ပါတယ်။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_27.html?showComment=1206714728713#c7509501950416835832'> March 28, 2008 at 7:32 AM
ကိုလင်းဦးေရ.... ကွျန်ေတာ်က ေလးြဖူ ပရိသတ် တေယာက် ပါဗျာ။ ကွျန်ေတာ် စွဲစဲဲွလန်းလန်း နားေထာင်တဲ့ အဆိုေတာ်ေတွထဲမှာ သူလဲထိပ်ဆံုးကပါတယ်ဗျ။
သီချင်းကို ေကာ်ပီလုပ်တာ မေ၀ဖန်လိုေပမယ့် copyကို own tune ေြပာတာေတာ့ ကွျန်ေတာ်လည်း မြကိုက်ဘူး။
ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သီချင်းပဲဆိုတယ် လို့ေြကွးေြကာ်ေနတဲ့ ကွျန်ေတာ်ချစ်တဲ့ မန္တေလးသား ကိုခင်ေမာင်တိုးလဲ copy ကို own tune ေြပာြပီးဆိုထားတဲ့ သီချင်းေတွ ရိှပါတယ်ဗျာ။ လိုအပ်ရင် ကိုတိုးြကီး copy လုပ်ထားတဲ့ သီချင်းရှာေပးလို့ ရတယ်ဗျ။ ကွျန်ေတာ်က ဂီတကိုြကိုက်ေပမယ့် ကိုလင်းဦးေလာက် ေလ့လာမထားလို့ မေရးရဲတာဗျို့။ ကွျန်ေတာ်တို့ ေ၀ဖန်ြပစ်တင်သင့်ပါြပီ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_27.html?showComment=1206718414303#c8352557159594025874'> March 28, 2008 at 8:33 AM
ကိုလင်းဦးေရ.. မလွယ်ဘူးဗျာ။ ြဖတ်ညှပ်ကပ်ကေတာ့.. ကျေနာ် ြကိုက်တဲ့ Firehouse band ဆိုတဲ့ သီချင်းေတွကို စည်သူလွင်က ြပန်ဆိုထားတာ.. ေနာက် ၀ိုင်၀ိုင်းသီချင်းေတွ အားလံုး (အားလံုးေနာ်) တရုတ်နဲ့ ဂျပန်သီချင်းေတွကို ဒဲ့ချည်း သံစဉ်ယူထားတာ..
ေနာက်တခုက ကျေနာ်တုိ့ ြမန်မာြပည်ကေန နိုင်ငံြခား သီချင်းလာဆိုရင် လာြကည့်တဲ့ နိုင်ငံြခားသားေတွက မင်းတို့သီချင်းသံစဉ်က ငါတို့ သံစဉ်နဲ့ ချွတ်စွပ်ပဲေနာ် ဆိုပဲ။ ေဇာ်၀င်းထွဋ်တို့ ေလးြဖူတို့ဆိုတာက အိမ်ကျယ်ပဲ ြဖစ်ေနေသးတယ်ဗျ။ အသံကေတာ့ ရှယ်ပါပဲ။ သီချင်းေရးဆရာေတွက ကိုယ်ပိုင်ဦးေနှာက်နဲ့ မေရးချင်ဘဲ ကူးချြကေတာ့ မျက်နှာငယ်ရတာပဲဗျ။ သံစဉ်ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် စပ်တတ်ေအာင် စပ်ြကပါလားဗျာ။ ကူးချေတာ့ေကာ ပိုလွယ်သွားေကာတဲ့လား။ မတူတူေအာင် လိုက်တီးေနရတာ ဒုက္ခများတယ်ဗျာ။ ဒါကိုပဲ သံစဉ်တူေအာင် လိုက်တီးနိုင်လို့ ဂုဏ်ယူေနသူေတွက ရှိေသး။
ကိုယ်ပိုင် တီထွင်ဉာဏ်ေလးနဲ့ ြမန်မာမူ အဂင်္လိပ်တူရိယာေတးဂီတေလး ြဖစ်ထွန်းေစချင်တယ်ဗျာ။ တကယ်ပါ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_27.html?showComment=1206798414743#c5703985098771211331'> March 29, 2008 at 6:46 AM
ဒီပို့စ်မှာေတာ့ ခင်ဗျားကို ေလးစားသွားြပီဗျာ။ ကျုပ်က သီချင်းေရးတဲ့သူ။ တစ်ခါတစ်ေလကျေတာ့ ဂီတေလာကမှာ ကျုပ်တို့ေတးေရးဆရာေတွကို သိပ်မသိြကဘူးဗျ။ ဒါေပမယ့် ကျုပ်တို့ေြကာင့် အဆိုေတာ်ေတွ ခံရေပါင်းများြပီ။ ဥပမာ ခင်ဗျားေြပာတဲ့ ေလးြဖူလို သီချင်းမျိုးေတွေပါ့။ ကျုပ်သီချင်းေတွကိုလည်း Band မှာ တီးရင် ကျုပ်က Arrangement လုပ်တဲ့သူကို အစ်ကို ဟို သီချင်းထဲက Mood လိုမျိုးဗျာ။ ကျုပ်က အဲလိုေရးထားတာလို့ ေြပာလိုက်တာများတယ်။ (ဒီလိုေြပာလို့ ကျုပ်တို့ ညံ့တယ်လို့ ထင်ချင်ထင်ဗျာ။) ကျုပ်တို့ က အေနာက်တိုင်းဂီတကို တီးတာဆိုေတာ့ အေနာက်တိုင်း ဂီတ ကိုမှီးရတယ်ဗျ။ ေဆာင်းဦးလိှုင် သီချင်းေတွမှာ ဆို Formula Cord ရှစ်ခုတည်းကို Round တီးသွားတာေတွ အများြကီးပဲ။ တကယ်ဗျ။ Big Bag ရဲ့ `နီးနီးေလးနဲ့ေ၀း´ ထဲက (အေတွးေတွထဲ မင်းရဲ့ အသံြကားတဲ့အချိန်တိုင်း... ငါဟာ အရူးတစ်ေယာက်လိုြဖစ်ခဲ့...) ဆိုတာ အဂင်္လိပ် သီချင်း `Nothing Gonna Change My Love For You´ အစထဲက (If i had to live my life without your near me...) နဲ့ ဆင်ေနတာဗျ။ ေတးေရးဆရာေတွ ေြပာတဲ့ စကားတစ်ခုရှိတယ်။ ရှစ်ဘားအထိ တူလို့ရတယ်တဲ့။ ရှစ်ဘားေကျာ်ရင်ေတာ့ ေကာ်ပီတဲ့။
ကဲဗျာ။ ခင်ဗျားဘက်က ေထာက်ခံြပီး ေြပာလိုက်မယ်။ `C O P Y = ကိုယ်ပိုင်´ တဲ့...။ မယံုမရှိေလနဲ့။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_27.html?showComment=1211306581537#c667290667809122755'> May 20, 2008 at 11:03 AM
အခုမှ ဒီဘေလာ့ ကိုေတွ့တယ် ကိုလင်းဦး။ ညီေလး ချီရွန် ေြပာလို့ပါ။ ဒီပို့စ်ကုိ အေတာ် သေဘာကျတယ်ဗျာ။ ေြပာရရင်ေတာ့ ကိုဟန်သစ်ြငိမ် ေြပာသလိုပါပဲ။ ရှစ်ဘား အထိေတာ့ တူလို့ရပါသတဲ့ .. ဒါေပမယ့် အြမဲတမ်း ရှစ်ဘားတိုင်းမှာ Note တလံုးမသိမသာလဲွှြပီးေရးလိုက်ရင် ေကာ်ပီ မဟုတ်ေတာ့ဘူးဆိုေပမယ့် ခိုးတာကေတာ့ သိသာေနမှာေပါ့ဗျာ .. ေလးြဖူကို ကျေနာ် အရမ်းြကိုက် ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် သူေြပာသွားတဲ့စကားတခွန်းကိုေတာ့ လံုး၀ လက်မခံနိုင်ဘူးဗျ။ ဘာတဲ့ "၂၁ ရာစုလဲေရာက်ေနပါြပီ၊ ကုိယ်ပိုင်သံစဉ်ရယ်၊ ေကာ်ပီရယ် မခဲွြခားသင့်ေတာ့ပါဘူး" ဆိုလားပဲ။ တကယ်ေတာ့ ၂၁ ရာစုေရာက်ေနလို့ကို ပိုြပီး ခဲွြခားြကရမှပါ။ ေကာ်ပီ ဆိုတာ တနည်းအားြဖင့် မေထာက်မညှာတမ်းေြပာရရင် ေတာ့ သူများ အနုပညာကို ခိုးတာပါပဲ။ အခုဆို Copyright ကိစ္စေတွလည်း ေရှ့တန်းေရာက်လာြပီဆုိေတာ့ ပိုြပီးေြပာြကရေတာ့မှာေပါ့ဗျာ။ သူေြပာသွားတဲ့ ေကာ်ပီ မှာလည်း အားထုတ်မှုတခုရှိပါတယ်ဆိုတာကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါေပမယ့် အတုဟာ အစစ်ေလာက် ဘယ်ေတာ့မှမေကာင်းတဲ့အတွက် ြမန်မာြပည် ဂီတေလာကသားများ ေရသာခိုတဲ့စိတ်ေလး ေဖျာက်ြပီး ကိုယ့်ေြခေထာက်ေပါ် ကိုယ်ရပ်တည်ဖို့ ြကိုးစားသင့်ြက ပါြပီ။
ဒီ Post တခုတည်းနဲ့တင် ကိုလင်းဦး တာ၀န်ေကျပါတယ်ဗျာ။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_27.html?showComment=1218643864231#c7165517416329868650'> August 13, 2008 at 9:11 AM
ေတာ်ေတာ်လန်းတယ်ေရးထားတာေတွ ေတာ်ေတာ်လည်းေပျာ်တယ် ဘာြဖစ်လုိ့လဲဆိုေတာ့ Rock ဂီတကို လူေတွက တစ်ကယ့်ကို အဟုတ်ထင်ေနတာ own tune အစစ်ေတွထင်ေနြကတာ အခု အကိုအဲလိုချြပလိုက်ေတာ့ အဲဒီ rocker ေတွေသာက်ရှက်ကိုကဲွေရာပဲ အလိမ်ေတွေပါ်ကုန်ြပီေလ အခုချိန်ဆို ေဆွ့ေဆွ့ေတာင်ခုန်ေနေလာက်ြပီ........ ေကျးဇူးပဲ ကိုလင်းဦးေရ.. ေနာက်လည်းများများေရးအံုးေနာ်
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_27.html?showComment=1261110383190#c5697717758754955636'> December 17, 2009 at 8:26 PM
ခင်ဗျား ကိုယ်တိုင်ပဲ လုပ်ြကည့်ပါအံုး
ေ၀ဖန်မယ် ဆိုလဲ ေသချာ တိတိ ကျကျေလးေတာ့
ူ်'' သံစဉ်နဲ့ Chord အသွားအလာ ေတွ ဆင်တူယိုးမှားရိှတဲ့ သီချင်းနှစ်ပုဒ်မှာ Arrange ချင်းကအစ တူေနတာကေတာ့ သိပ်မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီလို သီချင်းေတွ အားလံုးက ခပ်ဆင်ဆင်ေတွြကည့်ပဲ ဗျ
ေသချာလဲ လိုက်နာေထာင် ြကည့်ပါအံုး
သူတို့ က ဒီလို သီချင်းမျိုးေတွ အြမဲ နားေထာင်ြပီးေတာ့ ဒီသံစဉ်ေတွ လွှမ်းေနတာေတာ့ ရှိ
နားမလည်ပဲ စွတ် မေြပာသင့်ဘူး ထင်တယ်
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_27.html?showComment=1261131565104#c1656801188535647887'> December 18, 2009 at 2:19 AM
play ဆိုသူခင်ဗျာ.. ဒီကိစ္စက ဂီတ ဂျာနယ်မှာ အတိတလင်း ကျွန်ေတာ်ေရးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း ေလးြဖူေရာ သီချင်းေရးသူေကာ လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ မည်သူမှ ြပန်လည်ြပီး ေြပာဆိုြခင်းမရိှဘဲ သူတို့အမှားကုိ သူတို့သိပါတယ်။ နားမလည်ဘဲ ဇွတ်မေြပာသင့်ဘူးဆိုေတာ့... ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်ေတာ်နားလည်သေလာက်နဲ့ ရှင်းခဲ့တာကို ကာကယံရှင်ကိုယ်တိုင်များက လက်ခံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ... အဆင်ေြပပါေစဗျာ
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_27.html?showComment=1265483897395#c7534268406847773379'> February 6, 2010 at 11:18 AM
တုိက်တုိက်ဆုိင်ဆုိင်ပဲ ကျွန်ေတာ်လည်း ဂီတေလာကကအေြကာင်း စိတ်ဝင်စားေနသူတစ်ဦးပါ။
အေတွးအြမင် ေဆာင်းပါးေတာ်ေတာ်များများကုိ သေဘာကျစွာနဲ့ ဖတ်ရှုသွားပါတယ်။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/03/blog-post_27.html?showComment=1268802357021#c1073749481306030454'> March 16, 2010 at 10:05 PM
အမှန်ေြပာြပရရင် အရမ်းရှက်ဖို့ေကာင်းတယ် ခင်ဗျ။ ဘာြဖစ်လို့လဲဆိုေတာ့ ကုိယ်ကနိုင်ငံြခားသား အဂင်္လိပ်လူမျိုးေတွေရှ့မှာ အဲဒီသီချင်းေတွကို ဗမာလို သွားဆိုမိေတာ့ သူတို့က အံ့ြကြပီး ေကာင်းတယ်ေနာ်လို့ေြပာြပီး ေသေသချာချာ နားေထာင်ေနြကတယ်။ ေနာက်ေတာ့ သူတို့ပါ လိုက်ဆိုပါေလေရာ။ ကိုယ််က အဲ့ဒီေတာ့မှ ဟဟ ဘယ်လိုြဖစ်တာပါလိုက်နဲ့ေပ့ါ။ ဟီးဟီး အခုမှပဲေပါ်ေတာ့တယ်။